China Thidiazuron (TDZ) စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Lemandou
CAS အမှတ် 51707-55-2
မော်လီကျူး C9H8N4OS မော်လီကျူးအလေးချိန် 220,25
အမျိုးအစားများ နည်းပညာ နည်းပညာ WP
သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 97.0% min ။ ၉၅.၀% min ။ ၅၀.၀% min ။
အရည်ပျော်မှတ် 210-213 °ဂ /
ခန်းခြောက်ခြင်း 0.5% max ကို။ 2.0% max
pH ကို ၅.၅-၇.၅ 6.0-9.0
၁။ Thidiazuron သည်ဝါဂွမ်းထုတ်လွှတ်သည့် abscisic acid နှင့် ethylene ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး၎င်းသည် petiole နှင့်ဝါဂွမ်းစက်များအကြားအလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။
2. Tidiazuron သည်အာဟာရများကိုလျင်မြန်စွာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ အရွက်များသည်စိမ်းလန်းသောအခြေအနေတွင်ရှိပြီးအပင်၏အထက်ပိုင်းရှိငယ်ရွယ်သောဝါဂွမ်းစည်များသို့လျင်မြန်စွာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်၊ ချည်ပင်များမသေဘဲရင့်မှည့်လာခြင်း၊ အထွက်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေး။
၃။ Thidiazuron သည်ဝါဂွမ်းကိုအစောပိုင်းကရင့်မှည့်စေနိုင်သည်။ ဝါဂွမ်းတွင်အခွံများ၊ လွင့်စင်ခြင်းများ၊ ပန်းများမကျခြင်း၊ အမျှင်အရှည်တိုးခြင်းနှင့်စက်မှုနှင့်လက်စွဲရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်အကျိုးရှိသည်။
၄။ Thidiazuron ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားပြီးအရွက်များသည်အစိမ်းရောင်အခြေအနေတွင်ကျသွားပြီး“ ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းမရှိသော်လည်းပြtheနာ” ကိုဖြေရှင်းပေးပြီးအရွက်များလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချပြီးစက် ၀ ယ်ထားသောဝါဂွမ်းသို့လျှော့ချပေးသည်။ စက်မှုလယ်ယာချည်ဖြင့်လည်ပတ်သည့်လုပ်ငန်း၏အရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှု။
5. Thidiazuron သည်နောက်ပိုင်းတွင်ပိုးမွှားများ၏ပျက်စီးမှုကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။
၁။ လျှောက်လွှာတင်ချိန်သည်စောလွန်းနေသင့်သည်၊ မဟုတ်လျှင်အထွက်နှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
2. ပက်ဖြန်းပြီးနှစ်ရက်အတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုသည်ထိရောက်မှုကိုသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မဖြန်းခင်ရာသီဥတုကိုဂရုစိုက်ပါ။
3. phytotoxicity ကိုရှောင်ရှားရန်အခြားကောက်ပဲသီးနှံများကိုမညစ်ညူးစေပါနှင့်။
ရှေ့သို့ 4-Chlorophenoxyacetic Acid (4-CPA)
နောက်တစ်ခု: Forchlorfenuron (KT-30)